OTU ESI EGBOCHI ONYE ANA-AKPỌ NA VIBERA - VIBER - 2019
Esi egbochie kọntaktị na Viber maka Android, iOS na Windows
Site n'enyemaka nke ihe nchọgharị weebụ, ị nwere ike ọ bụghị naanị ile saịtị, kamakwa jiri ha dị ka ihe dị ike maka ọdịnaya ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, site na Yandex Browser ị nwere ike ibudata vidiyo na ọdịyo site na netwọk mmekọrịta na saịtị ntanetị dịka YouTube, na-eji mgbatị pụrụ iche.
Video DownloadHelper (ma ọ bụ naanị DownloadHelper) bụ ihe gbakwunyere na Google Chrome ma tinye ya na Yandex Nchọgharị. Mgbe echichi, onye ọrụ nwere ike ibudata vidiyo site na saịtị dị iche iche, ma Russia ma ndị mba ọzọ. Mgbatị a dị iche na ndị ọzọ niile na ọ nwere ike ibudata ọdịyo na vidio - ọ nweghị ihe nchọgharị ọ bụla nwere ike ịnya isi.
Ihe ndi ozo: Video DownloadHelper Review
Otu esi eji Video DownloadHelper
Enyere ndọtị a n'otu ụzọ ahụ ọ bụla ọzọ. Ikike ya na-enye gị ohere ibudata ọ bụghị naanị site na netwọk mmekọrịta ndị mmadụ na ebe nrụọrụ weebụ vidio, kamakwa site na saịtị ndị ọzọ ebe enwere ọdịnaya multimedia. N'adịghị ka aha ya, tinye-on nwere ike ibudata ọ bụghị naanị vidiyo, kamakwa egwu.
N'ụzọ dị mwute, maka ndị na-eme nchọgharị na engine Chromium, a gbanweghị mgbakwunye a n'otu ụzọ ahụ maka Firefox, ọ nọkwa na "beta" steeti. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị ọrụ na-eme mkpesa na DownloadHelper anaghị ebudata ọdịnaya site na saịtị dị iche iche kwupụtara dị ka akwado, dịka ọmụmaatụ, site na YouTube. Site na ndabara, nhọrọ "Leghaa youtube", ma ọbụlagodi mgbe ọ kwụsịrị, vidio a na - esiteghi na nke ọ bụla na - ebudata vidiyo site na onye ọ bụla. A na - atụ anya na n'ọdịnihu, ndị mmepe ga - agbazi nghọtahie ndị a n'ọdịnihu.
Soro njikọ a ka ibudata ndọtị ahụ site na Weebụ Google.
Na mepee taabụ, pịa "Wụnye".
Na windo nke gosipụtara, gosi nkwenye ahụ site na ịpị "Tinye ndọtị".
Mgbe echichi ya, bọtịnụ ahụ ga-apụta na kọlụm kwekọrọ na nchọgharị ahụ.
Gaa na saịtị ọ bụla na vidiyo ma malite ịkpọ ya - nke a dị mkpa ka ntinye nwere ike ịchọpụta ihe ị ga-ebudata.
Pịa bọtịnụ ndọtị. Window ga-egosipụta nha na usoro nke vidiyo a họrọ maka nbudata.
Ọnụ ọgụgụ "1" na-esote bọtịnụ dị na nke a pụtara na ọ bụ naanị otu ụdị video dị. Maka obere vidiyo dị iche iche nwere ike ịnwe ọtụtụ nhọrọ: site na mma dara FullHD.
Hụgharịa akara ahụ na aha vidiyo ma pịa bọtịnụ nke na-egosi.
A menu mepee site na njirimara ndị dị, n'etiti nke ịhọrọ "Ịkwado"ma ọ bụ"Ngwa ngwa ngwa".
Na nke mbụ, Windows Explorer ga-emeghe, ị ga-ekwesị ịkọwa ọnọdụ iji chekwaa faịlụ, na nke abụọ, ntinye ga-echekwa ihe nkiri ahụ na ebe ebudatara faịlụ niile ndabara.
Lee kwa: Esi gbanwee nchekwa nchekwa na Yandex Browser
N'otu aka ahụ, DownloadHelper ga-ebudata egwu site na saịtị dị iche iche.
Gaa na saịtị ọ bụla na egwu ma gbanye egwu ahụ.
Pịa bọtịnụ tinye-na ma họrọ faịlụ achọrọ. Na saịtị ụfọdụ na egwu egwu egwu ị nwere ike ịchọta ndepụta dị otú ahụ na obere faịlụ:
N'etiti ha, chọta nhọrọ nke ga-adaba ogologo oge nke abụ ahụ.
Tinye ya na cursor ma pịa bọtịnụ nke na-egosi.
Site na ndepụta nhọrọ, họrọ "Ịkwado"ma ọ bụ"Ngwa ngwa ngwa".
Kedu saịtị m nwere ike ibudata?
E nwere ike ịhụ ndepụta nke saịtị ndị a na-akwado site na mgbakwụnye ahụ.
Pịa bọtịnụ DownloadHelper.
Gaa na bọtịnụ n'aka ekpe.
Site bọtịnụ ndị gosipụtara, họrọ ma pịa nke abụọ.
Aabụ ọhụrụ ga-emeghe site na ndepụta nke saịtị na-akwado.
DownloadHelper ndọtị na-arụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke saịtị ndị ga-amasị onye ọ bụla na-akwado iji mee ihe ntanetị na Ịntanetị. O nwekwara ike ịba uru maka ndị chọrọ ibudata ọdịyo / vidio egwu na-enweghị ichere faịlụ nke onye ọzọ gosipụtara na netwọk ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Viber 2019